Deg deg: War Yidi-diilo leh oo kasoo baxaya Wada-hadalka ONLF iyo Itobiya. | ogaden24
Deg deg: War Yidi-diilo leh oo kasoo baxaya Wada-hadalka ONLF iyo Itobiya.
Iyadoo meel xasaasiya ay marayaan wada-hadalada u dhexeeya Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia iyo mamulka Woyanaha oo saxaafadu dibad Joog katahay, ayaa waxaa soo baxaya xogo muhiima oo sheegaya in Kulamadii maanta dhex maray Labada dhinac ay ahaayeen kuwo si Hab-sami leh u socday.
Sida ay sheegayso xogta aanu Helay Ergada Labada dhinac ayaa isla meel dhigay inta badan Qodobadii maanta laga dooday oo uu kamid yahay Qodobka Afti ama Aayo-katalinta, kaasi oo maalinimadii shalay ahaa noqday caqabada 1-aad ee shirka lasoo daristay.
Ilo xog-ogaala oo kusugan madasha shirku kasocdo ayaa Ogaden24 u xaqiijiyay in Jawiga shirku yahay mid ay ka muuqato Yadidiilo iyo Rajo aad u Heer saraysa oo ka muuqata Ergada kala matalaysa Labada dhinac, kuwaasi oo marka laga yimaado daba kariixa Gudiga dhex-dhexaadinta muujinaya bisayl siyaasadeed oo laxidhiidha xal u Helida colaada Gaamurtay ee mudada dheer kasoo Taagnayd wadanka Ogadenia.
Dhinaca kale duhurnimada Bari ah ayaa lagu wadaa in Ergada kasocota dhinaca Jabhada ONLF ay shir Jaraa’id ku Qabtaan madasha shirku kasocda, waxaana xogta aanu Helayno ay sheegaysaa in Ergadu si Waafi ah uga xog warami doonaan Geedi socodka wada-xaajoodka oo Guud ahaan shacabka Somaaliyed oo kuwa Ogadenia ugu Horeeyaan ay si aada uga dhursugayaan.
Arimaha shirka iyo Kolba wixii kasoo Kordha kala soco Warbaahinta Ogaden24.